Maitiro ekugonesa otomatiki Google Analytics UTM yekutevera muSalesforce Marketing Cloud | Martech Zone
By default, Salesforce Marketing Cloud (SFMC) haina kubatanidzwa neGoogle Analytics yekuwedzera UTM yekutevera querystring variables kune imwe neimwe link. Zvinyorwa paGoogle Analytics kubatanidzwa zvinowanzonongedza Google Analytics 360 kusanganisa ... ungangoda kutarisa izvi kana iwe uchinyatsoda kutora analytics yako kune inotevera nhanho sezvo ichikubvumidza iwe kubatanidza vatengi saiti kubatikana kubva kuAnalytics 360 mune yako Yekushambadzira Cloud mishumo.
Zvekutanga zveGoogle Analytics Campaign Tracking yekubatanidza, zvisinei, zviri nyore kuisa otomatiki imwe neimwe yeUTM paramita kune yega inobuda link muSalesforce Marketing Cloud email. Pane chaizvo 3 zvinhu:
Account-wide link tracking parameters muAccount Setup.
Yekuwedzera Link paramita muImeiri Muvaki iyo iwe yaunogona kusarudza kugadzirisa kune UTM paramita.
Tevera Zvisungo zvinogoneswa muImeyili Tumira wizard.
Google Analytics Link Tracking paSFMC Business Unit Level
Ini ndinoedza kudzivirira mamwe matanho panguva yekutumira nekuti kana wangoita mushandirapamwe, hapana kudzokera kumashure. Kutumira email yemushandirapamwe uyezve kurangarira kuti wanga usina yekutevera yemushandirapamwe inogoneswa musoro, saka ndinokurudzira maparamendi eUTM kuti aonekwe otomatiki padanho reakaundi mukati meSFMC.
Kuti uite izvi, maneja weakaundi yako anoenda kune yako Account Setup (sarudzo kumusoro kurudyi pasi pezita rako rekushandisa):
Enda kune Setup> Kutonga> Data Management> Parameter Management
Izvo zvinovhura peji rezvigadziriso paunogona kugadzirisa yako Webhu Analytics Connector
Nekusavimbika, iyo ma parameter akaiswa sezvinotevera pakutevera mukati memishandirapamwe:
Kurudziro yangu ndeyekuvandudza izvi ku:
CHERECHEDZA: Isu takaona apo tambo dzekutsiva dzinosiyana kune vatengi. Unogona kuda kuonesa tambo dzako nerutsigiro rweKushambadzira Cloud. Uye, chokwadi, iwe unofanirwa kutumira kune chaiyo bvunzo runyorwa uye simbisa iyo UTM macode akawedzerwa.
Izvi zvinowedzera zvinotevera:
utm_campaign yakagadzirirwa SFMC
utm_medium yakagadzirirwa enamel
utm_source yakasetwa zvine simba kune yako Chinyorwa Mazita
utm_content yakasetwa zvine simba kune yako Email Name
utm_term is sarudzo seta uchishandisa imwe email hunhu kubva kune yako email muvaki
Sevha zvigadziriso zvako uye parameter ichawedzerwa kune iyo account.
Kugadziridza Yako Yekuwedzera Email Maitiro
Ini ndakavanza iyo account-level data kubva pane ino skrini, asi iwe unoona kuti ikozvino ini ndinogona kugadzirisa iyo yekuwedzera email hunhu paramende kumisikidza iyo. utm_term sarudzo. Ini ndingangoda kushandisa izvi kune zvakakosha zvikamu zveemail yangu senge upsell, cross-sell, kuchengetedza, nhau, sei-kuita, nezvimwe.
Tevera Zvinongedzo Pakutumira muSFMC
By default, Track Clicks inogoneswa kana uchitumira muSFMC uye ini ndingakurudzira kusambodzima iyo sarudzo. Kana ukadaro, haingobvisi yako UTM yekutevera, inobvisa yese yemukati yemushandirapamwe yekutsvaga iyo inotumira mukati meKushambadzira Cloud.
Ndizvo… kubva zvino zvichienda chero maemail paanotumirwa kuburikidza neiyo account, ndizvozvo Google Analytics UTM Tracking querystring inowedzerwa kuitira kuti iwe ugone kuona mhedzisiro ye email yako yekushambadzira mukati meGoogle Analytics account.
Salesforce Marketing Cloud Rubatsiro: Manage Parameters
Kana kambani yako ichida kuita kana rubatsiro rwekubatanidza neSalesforce Marketing Cloud (kana mamwe masevhisi ane chekuita neSalesforce), ndokumbirawo ukumbire rubatsiro kuburikidza Highbridge. Kubudisa pachena: Ini ndiri shamwari mu Highbridge.
Tags: __AdditionalEmailAttribute1EmailName_google analyticssei kutiLinkNameListNameparameter managementsalesforce marketing cloudsfmctrack linksparamita utmutm_campaignutm_contentutm_mediumutm_sourceutm_termweb analytics connector
SlayerAI: Kusarudza Mazhinji Mazwi Akasiyana Iwe Unoda Kuhwina